iOS 11 inozotibvumidza isu kuyananisa iyo data kubva kuhutano Hutano neICloud | IPhone nhau
Chirongwa chehutano chave nzvimbo yemitsipa uko data rese rinounganidzwa kuburikidza nemidziyo yakasiyana inoenderana neichi chishandiso rakagadziriswa, pakati pazvo zviri pachena kuti tinowana iyo data yakanyorwa kuburikidza neApple Watch nebasa reApplication. Kubva kuvambwa kwayo, kwave nevazhinji vashandisi vasina kunyatsonzwisisa kuti sei pakanga pasina chimiro chemunhu chesimba gadzira kopi yeiyi data muICloud, kuitira kuti kana chishandiso chadzoreredzwa, kana kana tikatora imwe nyowani, zvinyorwa zvese zvakapfuura zvaisakwanisa kuraswa pane chishandiso chitsva. Asi zvapera neIOS 11.
Kutenda kuIOS 11, rese data rakachengetwa muhutano Hutano rinozongo chengetwa muICloud, pamwe neMessage yatinotumira kuitira kuti ivapo pamidziyo yese, nenzira iyi futi, kana tikashandisa akasiyana madhizaizi kumhanya uye kwezuva nezuva data rese ichavandudzwa kuburikidza neICloud pazvinhu zvese zvine chekuita neakaundi imwechete.
Mune shanduro dzakapfuura dzeIOS, senge yazvino iyi, kuwiriraniswa kwedata reiyo Hutano application kwaisagoneka. Kana mushandisi aida kugadzira kopi yedata yakachengetwa mune ino application kuti aidzorere pane mamwe majaira, vaitofanira gadzira kopi yakavharidzirwa kuburikidza neTunes uye woidzosera kuchishandiso chitsva, kana kushandisa chishandiso chinowanikwa muApp Store, icho chinotibvumidza kuti tizviite nekukurumidza uye nyore, sekureba sekuda kwatinoita kubhadhara iyo 5 euros zvazvinoita.
Kuti tishandise kuwiriranisa uku, tinofanirwa kuenda kuZvirevo, tinya pane mushandisi uye enda kuICloud. Ichi chikamu chinoratidza mafomu ese anoshandisa iCloud kuwiriranisa iyo data. Ne iOS 11, iyo Hutano application inoonekwa, iyo switch yatinofanira kumisikidza kana tichida kuti data reichi chishandiso richengetwe muApple gore uye riwanikwe kune ese madivayiri ane hukama neiyo imwechete ID.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » iOS 11 inozotibvumidza kuyananisa iyo data kubva kuhutano Hutano neICloud